Olu luvo lubonisa i-iPhone 13 enenotshi encinci kunye nekhamera engcono | IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | 31/07/2021 11:47 | iPhone 13
Los amarhe kunye nokuvuza malunga ne-iPhone 13 baqala ukwenza amaphepha aphambili eendaba. Njengonyaka ngamnye, xa sisondela kwinyanga kaSeptemba, idatha, amarhe kunye neengcinga ezinokubakho malunga nokuba isizukulwana esilandelayo se-iPhone sinokuba njani siqala ukupapashwa. Ngesi sihlandlo i Ingqondo entsha ye-iPhone 13 ebandakanya izinto ezimbini ekuthethwe ngazo ixesha elide. Kubonakala ukuncitshiswa kwenotshi ephezulu kunye nokuphuculwa kweekhamera kukwaqikelelwa kwinqanaba lobuchwephesha kunye noyilo.
Iikhomputha ze-iPhone 13 ziqala: ukubala ukuya ku-Septemba
Yithi molo kwelona notshi incinci, ikhamera entsha eya kukuvumela ukuba uthathe iifoto ezingcono. Ibhetri yeMagSafe oza kuhamba nayo, ine-1460 mAh. Ngaphezulu kwayo, ibhetri enkulu ihlala ukuya kuthi ga kumaxesha e-1,5 ubude.
Le nto intsha epapashwe ngumsebenzisi owaziwayo uConceptsiPhone ibonisa i-iPhone 13 enombala omtsha we-orenji yombane. Ngapha koko, kuyo yonke ividiyo sinokubona enye into entsha: Iibhetri zeMagSafe ezinemibala. Umsebenzisi uxela kwangaphambili ukuba iApple inokubonelela ngezi bhetri, zikhutshwe kwiveki ephelileyo, ngesakhelo umbala we-iPhone 13 kunye nomnye omhlophe endaweni yawo wonke umzimba omhlophe njengoko kuthengiswa ngoku.
Amarhe abuyayo, i-iPhone 13 iya kuqala kwiscreen esihlala sikhona
Kwinqanaba lobuhle, Umxholo we-iPhone 13 uyafana ncam ne-iPhone 12. Ngaphandle kwento eyodwa: iikhamera. Kuya kufuneka sikhumbule ukuba sijamelene nemodeli enyusa kuphela i-engile ebanzi kunye ne-engile ebanzi kwaye, okwangoku, ezo khamera zikwindawo emi nkqo ngasemva. Nangona kunjalo, kule nxu lumano sibona njani Iikhamera ezimbini ziya kujongana, ushiya i-flash kwi-quadrant ephezulu ngasekunene nakwimakrofoni esezantsi ekhohlo.
Okokugqibela, enye inoveli entle esiyithandayo ukuncitshiswa kwenotshi yesikrini kumda ongasentla. Khumbula ukuba le notshi okanye inotshi yinkcazo ye-ID yobuso eyazisa zonke iikhamera kunye nabenzi boluvo abajongene nokunikezela ngedatha ukuvula isixhobo. I-Apple isenokuba ikwazile ukuncipha kunye nokudibanisa ezi zivamvo zenze indawo encinci, ukuvumela ukukhulisa kancinci isikrini, iqinisekisa ukuba inesithuba esithe kratya kwibar yesimo se-iOS.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » Olu luvo lubonisa i-iPhone 13 enotshi esezantsi kunye nekhamera engcono
Ukuba une-Apple Watch Series 2 uhlala ngaphandle kwe-watchOS 8